News18 Nepal || राष्ट्र बैंकले ल्यायो नयाँ पुर्नकर्जा कार्यविधि, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था - News18 Nepal
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ पुर्नकर्जा कार्यविधी २०७७ जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गत हप्ता चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पुनकर्जाको सिमा बढाउने लगायतका घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार साविकको कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याइएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा भने अनुसार पुर्नकर्जा कोषको सिमा ५ प्रतिशतले बढाउने गरिने कार्यविधि ल्याइएको छ । तर, कोरोनाको असर कम हुदैं गएपछि त्यो सिमा घटाउँदै लैजाने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम पुनकर्जा, बिशेष पुनकर्जा र साधारण पुनकर्जा गरेर ३ प्रकारको पुर्नकर्जा प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
साधारण पुर्नकर्जामा ग्राहकलाई ३ प्रतिशत व्याजदर तोकिएको छ भने अन्य पुर्नकर्जामा ५ प्रतिशत व्याजदर निर्धारण गरिएको छ । पुर्नकर्जाको अवधी भने १ बर्षको मात्रा हुने बताइएको छ । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजत पत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुर्नकर्जाको अधिकतम सीमा रु ५ करोड हुनेछ ।
यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुर्नकर्जा रकम कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कन गरी उपलव्ध गराउने पुर्नकर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा रु. २० करोडसम्म हुनेछ ।
यसरी ग्राहक अनुसार प्रदान गरिने पुर्नकर्जा रकम कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकबाट आह्वान गरी इजाजत पत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुर्नकर्जा रकम कुल पुर्नकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आज बिहिबार, कुन देशको मुद्राको भाउ कति ?
एक लाख नाघ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नबिल बैंकद्वारा स्क्यान एण्ड वीड्र (Scan & Withdraw) सेवाको शुभारम्भ
नारायणगढ-मुग्लिन सडक प्रयोग गरे बापत दस्तुर तिर्नुपर्ने, कुन सवारीको कति ?
सुनको मूल्यले फेरि तोड्यो अहिलेसम्मकै रेकर्ड, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नेपालमा सुन चाँदीको मुल्यले तोड्यो रेकर्ड, कति पुग्यो ?
सुनको मूल्यले रच्यो इतिहास, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?